Daraasad Muujisay In Magaca Maxamed Noqday Kan Maanta Dunida Loogu Isticmaal Badan Yahay Ragga - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Daraasad Muujisay In Magaca Maxamed Noqday Kan Maanta Dunida Loogu Isticmaal Badan...
Malaha tani waxa ay u markhaati furaysaa dooddii ka taagnaan jirtay shacabkeena dhexdiisa ee ahayd in Magaca Maxamed yahay kan loogu isticmaalka badan yahay magac bixinta inamadeena yaryar halka in badan oo dadka ka mid ahina ku doodaan in aanu ahayn ee magaca Cabdi yahay kan ugu tirada badan ee dadkeenu la baxaan. Arrinta hadaba xiisaha lihi waxa ay tahay markii Wargeys laga leeyahay wadanka Spain oo lagu magacaabo ABC uu todobaadkan soo saaray warbixin uu kaga hadlayo daraasad muujisay in magaca Maxamed noqday magaca loogu isticmaal badan yahay sannadkan 2016 dunida guudkeeda iyada oo wiilasha yaryar ee dalalka adduunka ku dhashay loogu magac daray inta ugu badan magaca Maxamed oo ah magacii Nabiyullaahi Maxamed NNKHA oo ahaa Nabigii ugu dambeeyey ambiyada Ilaahay SWT dunidan guudkeeda u soo diray.
Wargeyska ABC oo ka mid ah wargeysyada loogu jecel yahay wadanka Spain, qaaradda Yurubna aa dlooga akhristo ayaa warbixintiisan ku sheegay in daraasad sannadkan la sameeyey lagu ogaaday in inka badan 150 Malyuun oo qof la sheegay in ay sitaan magaca Maxamed, dunida oo dhan. Daraasadan ayaa wargeysku sheegayaa in ay muujinayso in dalalka Pakistan, Hindiya iyo Bangladesh, magaca Maxamed looga yaqaano Mehmet, halka dalka Turkiga magacani ugu astaysan yahay Muhammad. Wargeysku waxa uu sheegay in dalalka Iiran iyo Afghanistan ay iyana Mahmad ula baxaan ragga iyada oo dalalka geeska Afrika loogu yeedho Mohamed, waxa kale oo wargeyskani sheegayaa in inta badan dalalka qaaradda Afrika gaar ahaan dalalka Galbeedka Afrika magacani ka yahay Mamadou halka ugu dambayn dalka Bosnia iyo dad badan oo islaamka yurub ah ay la baxaan Meho oo ah magaca Maxamed oo la soo gaabiyey. Korodhka isticmaalka magaca Maxamed waxa uu wargeysku ku sheegay in aanay kaliya sabab u ahayn dalalka muslimiinta ah ee ay sii laban laabayso dadka Muhaajiriinta ah ee dalal badan oo adduunka ah u tacabiraya kuwaasi oo isticmaalka Magaca Maxamed sii kordhinaya iyada oo daraasaddan lagu ogaaday in magaca Maxamed uu kaalinta koowaad kaga jiro magacyada ay la baxaan Muslimiinta qaaradda Yurub waxaana dalalkaasi ugu horreeya Faransiiska, Ingiriiska iyo Spain.